नारायणी नदी हाम्रो काल बन्न थालेको छ । बर्खायामको उत्तराद्र्धमा नारायणी नदीको कटानले जमिन बगाउन थालेपछि भरतपुर महानगरका दुई वडावासी एक साता त्रासैत्रासमा रहनुप¥यो । वडा नं. २७ र २८
भदौ दोस्रो सातायता वर्षा रोकिएको छ । छिटफुटबाहेक पानी नपरेका कारण बाढी र पहिरोको त्रास पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको छ । खहरे र खोलामा पानीको बहाव घटेको छ ।
कर्मचारीको कार्यक्रमबारे एक समीक्षा
गत शुक्रबार निजामती कर्मचारीहरुले आफ्नो महान् पर्वका रुपमा निजामती दिवस मनाए । कतै दर खाने, कतै खेल खेल्ने त कतै सडक तथा पदमार्गहरुको सरसफाइ गरेर दिवस मनाइएको थियो । कर्मचारीहरुले
सरकारी अस्पताल: लापर्वाहीको पराकाष्ठा
शनिबार न्यूज अफ नेपालमा सर्पले डसेर बिरामी भएका चितवनका एक बालकको उपचार हुन नसकेर मृत्यु भएको विदारक खबर सार्वजनिक भयो । जुन समाचारले भरतपुर अस्पतालको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा छताछुल्ल भएको छ
साक्षरताको विषयमा सोचौं
चार दशकदेखि मनाइरेको साक्षरता दिवस खासै प्रभावकारी भएको पाइएको छैन । सूचना प्रविधिको पहुँच वृद्धि हुँदै जाँदा यस वर्ष ‘डिजिटल संसारमा साक्षरताको महत्व’ भन्ने मूल नारासहित सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी
काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका राजमार्गमा टिपर आतंक बढेको बढ्यै छ । अधिकांश दुर्घटना टिपरकै कारण भइरहेका छन् । राजधानीमा मात्रै सडक दुर्घटनाबाट दैनिक औसत ५ जनाको मृत्यु तथा ३१ जना घाइते
गैंडा संरक्षणमा चुनौती
चितवन निकुञ्जमा कालगतिले गैंडा मर्ने क्रम बढेपछि संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा चितवनमा प्राकृतिक कारणले गैंडा मर्ने क्रम पाइएको छ । निकुञ्जको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा
सिंहदरवारको अधिकार गाउँ–गाउँमा लैजान नसक्दा आमजनताले सास्ती खेपेको कारण नेपालमा संघियताको घोषणा भयो । साथै संघियता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भयो । स्थानीय तह गठनले सिंहदरवार गाउँ–गाउँमा आएको
बलात्कारीविरुद्ध बोलौं, सबैले मुख खोलौं
पछिल्लो समय समाजमा बलात्कारका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । दिनहूँजसो आमसञ्चार माध्यममा बलात्कार र त्यसपछि हत्याका समाचार सुनिन थालेका छन् । बलात्कार बढेसँगै त्यसका विरुद्ध आवाज बुलन्द भए पनि यो
विभिन्न जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको अवैधरुपमा उत्खनन हुँदै आएको छ । विभिन्न खोलाबाट रातारात गिट्टी–बालुवाको अवैध निकासी भइरहे पनि स्थानीय प्रशासन निरीहजस्तै बन्न पुगेको छ । जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिहरुले असारदेखि
देशमा पहुँच र भनसुन, त्यसै गरी नाता र कृपावाद अझै व्याप्त छ । सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई ठेगान लगाउने चेतावनी दिन अझै छाडेको छैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रायः
नेपाली कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समयलाई मात्र मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि व्यावसायिक कृषि गर्नेको लहर अलि–अलि चल्न थालेको छ । हरेकको जिब्रोमा कृषिक्षेत्र जोडिनुलाई कृषिको विकासका लागि थपिएको ऊर्जा मान्न
नेपालको विकास हामी सम्पूर्ण नेपालीका लागि एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । यो हरेक नेपालीले बोल्ने शब्द पनि बनिसकेको छ । नेपालको विकास कहिले होला ? यो प्रश्न धेरैले गर्ने गर्छन्
दर खाँदा विचार पु¥याऔं
नेपाली महिलाको महान् पर्व हरितालिका तीज नजिकिएसँगै यति बेला विभिन्न संघसंस्था तथा समूहहरुले भेला हुने र दर खुवाउने कार्यक्रमको आयोजना गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । वर्षात्पछिको मिलन र
भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) मा चिकित्सकसँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले देशभरको आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेपछि बिरामीहरु बिचल्लीमा परे । सरकारले
रजश्वला पाप होइन
महिलाहरूमा हुने रजश्वला अर्थात् महिनावारी र सुत्केरी बार्ने चलनलाई छाउपडी प्रथा भनिन्छ । मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा रजश्वला तथा सुत्केरी भएका बेला छाइछुइ गर्न नहुने, यसो गरे देवता रिसाउने
भक्तपुर–काठमाडौं मार्गमा सास्ती
अधिकांश भक्तपुरवासीले दैनिक काठमाडौं ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ । कोही जागिरका लागि त कोही व्यवसायका लागि आतेजाते भइरहन्छ । तर कोटेश्वरमा दिनदिनै सवारी जाम बढ्ने गरेको छ । कुनै दिनमा त यो
बलात्कारी नरपिचासलाई दुई शब्द
सुधिर पन्थी, भनभने–५, गुल्मी हालः बलम्बु, काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली समाज असुरक्षित बन्दै गएको विभिन्न घटनाले प्रमाणित गरेका छन् । अहिले बलात्कार तथा यौनहिंसाका घटनाहरुको प्रकृति झनै भयावहरुपमा प्रकट
अधिकार र पैरवीका कुरा
ऋषि खनाल, ठमेल । अधिकार र पैरवी महत्वपूर्ण विषय हो । राज्यले सूचनाको हक लागू गरेर कोही पनि व्यक्ति वा समुदाय सूचनाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्दै कानुनमै यस्ता कुराहरुको उल्लेख
शहरबजारको प्रमुख समस्या बन्यो फोहोर
नेपालका प्रमुख शहरहरुको प्रमुख समस्या फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुनु रहेको छ । नेपालमा हतारमै नगरपालिका घोषणा गर्ने तर न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगर्ने नगरहरु थुप्रै छन् । देशभरकै नगरपालिकाका बजार